Isikhululo sokulahla inkunkuma iRoborock Onyx senza yonke into ibelula [Hlaziya] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 15/07/2021 14:00 | Ukuhlaziywa ukuba 17/07/2021 13:24 | Ukuzenzekelayo ekhaya, elektroniki, Ikhaya, Reviews
Kutshanje sihlalutye apha i Roborock I-S7, Isicoci seerobhothi esikhuphayo kwaye sikhuphe iziphumo ezinomdla ngokwenene. Ukuza kuthi ga ngoku, elona xabiso lilungileyo lemali yerobhothi esiyijongileyo kwisiteshi. Nangona kunjalo, umda wokugqibelela ngeenkcukacha ezincinci, izitishi zokuzikhuphela ziyafuneka ngakumbi.
URoborock wazise isikhululo esitsha sokuzikhuphela kwaye sasihlalutya nzulu ukuze ujonge le nto yongezwa kwiRoborock S7. Fumanisa nathi ukuba ulondolozo lweerobhothi lucuthwe luye kwinqanaba elincinci kwaye ungalisebenzisa ixesha ongachithi ukhupha isixhobo.
Yinto enkulu Isithende se-Achilles Olu hlobo lwezixhobo, xa uzikhupha. Idiphozithi inikezela ngento oyinikayo, kwaye xa unezilwanyana zasekhaya (njengoko kunjalo kwimeko yam) inika ngqo ukucoca okuninzi kakhulu. Ke ngoko, ngalo lonke ixesha ndifuna ukuphinda ndiyisebenzise iRoborock S7 yam, kufuneka ndikhumbule ukuba ingaba ndiyikhuphile okanye hayi. Oku kuya kuba yingxaki encinci kakhulu kwesi sixhobo sivavanya ngaso, esi sikhululo sokuzikhuphela ukuba uRoborock iye yaqhelana nesona sicoceko sayo sokucoca siphume phambili kwaye ngokukhawuleza iba sesona sisebenzisana naso.
1 Izixhobo kunye noyilo: Isitayile seRoborock
2 Iinkqubo zokuqokelela inkunkuma nothuli
3 Ngoxhumo oluhlakaniphile
4 Amava omsebenzisi
Izixhobo kunye noyilo: Isitayile seRoborock
Isikhululo sokuzikhuphela seRoborock S7, kungenjalo kungenjalo, iza ngemibala emibini, emnyama nomhlophe, ehambelana nombala wesicoci seerobhothi. Inesiseko esiphakamileyo nesiphakamileyo, ngendlela efanayo enesistim esiphindwe kabini sesilinda esigcina itanki kunye nemoto yokutsala. Eminye, le dock yenza imisebenzi efanayo nezitishi zokutshaja, oko kukuthi, inokudibanisa irobhothi yakho kumandla okuqhubeka nokutshaja isixhobo.
Ubunzima: Iikhilogram ezi-5,5
Ubungakanani: 31.4 x 45.7 x 38.3 iisentimitha
Imibala ekhoyo: Mnyama nomhlophe
Inokubamba intambo ngasemva, ukuze ukwazi ukuyibeka ngokungacacanga nakweyiphi na indawo, into eyamkelekileyo kakhulu. Emazantsi kukho uburhabaxa obanceda ukunyuka isixhobo sinyuse ithambeka elincinci, ngendlela efanayo ethatha ithuba lokucoca izikhonkwane zokutshaja ngohlobo lweebrashi ezibekwe ngobuchule kule njongo. Ngaphandle kwamathandabuzo, siya kuyidibanisa ngokulula negama ngenxa yobungakanani bayo kunye noyilo lwayo, ke iyahambelana ngokupheleleyo into onokuyilindela kwiqabane likaRoborock S7.
Iinkqubo zokuqokelela inkunkuma nothuli
Eli candelo lokuqala libaluleke kakhulu, enyanisweni kubonakala kum libaluleke kakhulu kwaye yiyo loo nto ilixesha lokuthetha ixesha elide ngalo. Sele uyazi ukuba uninzi lwezi zikhululo zokukhuphela ngokuzenzekelayo zifuna uthotho "lweengxowa" ezihlala zinoyilo lobunini, kwaye ngaphandle kwazo azincedi nganto. Nangona kunjalo, esi sikhululo sokuzikhuphela seRoborock S7 sikuvumela ngeendlela ezimbini zokususa nokugcina ubumdaka:
Kwitanki yehermetic ngenkqubo yokutsala cyclonic
Kwingxowa «yokubambisa uthuli»
Ngempumelelo, Nokuba usebenzise okanye awusebenzisi ibhegi yetanki yeRoborock S7 lukhetho. Nangona kuyinyani ukuba le ngxowa yenzelwe uthuli kwaye ivumela ukuba sikhuphe isikhululo ngaphandle kokususa itanki, ayisiyonto ibalulekileyo.
Ingxowa yothuli inomthamo we-1,8 yeelitha kwaye itywina ngokuzenzekelayo. Siyibeka kwindawo ephezulu sisebenzisa isikhokelo sekhadibhodi kwaye siyikhuphe esezantsi xa kutywinwa. Le ngxowa inonyango lwe-antibacterial ukusoloko iqinisekisa imeko yezempilo.
Ngaphandle koku, ungaya ngqo kuyilo lweenkanyamba ezininzi (ngamanqaku ayi-15) ngezantya ezahlukeneyo eziza kukuvumela ukuba ukhuphe itanki yeRoborock S7 ngokulula. Sinamagunya amane kuxhomekeke kwingxolo kunye nokusetyenziswa kwamandla esiqikelele:
Ndicebisa ubuninzi, nokuba ingxolo inokunyuka ngaphezu kwesiqhelo, nantsi into ebalulekileyo kukukhupha irobhothi ngokuchanekileyo, kwaye iyayenza loo nto. Le tanki inecebo lokucoca ulwelo eliqhelekileyo kunye nezinye izihluzi ezibini eziqinisekisa itywina elipheleleyo ukuze uthuli lungaphumi. Ayitsho ngaphandle ukuba zonke ezi zihluzo zingasuswa kwaye zicocwe ngokulula phantsi kwempompo, nangona uvavanyo lwethu khange lube lude kangako. Kwimeko apho sikhetha ukukhupha yonke into ngenkqubo yokutsala iisilinda ezininzi, siyakuba netanki le-1,5 yeelitha, elisezantsi noko kunengxowa yokubambisa uthuli.
Umthamo wetanki ujikeleze iiveki ezine
Indibaniselwano yazo zonke ezi teknoloji ziyenza ukuba ibe sisixhobo esahlukileyo, kuba akusekho zixhobo zokuzikhupha zerobhothi ezivumela ukusetyenziswa kwengxowa zombini kunye netanki emiselweyo ngokungafaniyo. Kuko konke oku, kuthathelwa ingqalelo oku kungasentla, ifumene izatifikethi ezahlukeneyo e-TÜV Rheinland malunga nokuphuculwa kweemeko zokuphila kwabagulayo.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, isikhululo sokuzikhuphela seRoborock S7 sinxibelelana nesicelo seRoborock ngendlela efanayo nesicoci seerobhothi. Kwithiyori, kuthatha ithuba lokufumana ialgorithm eyenziwe luphawu ukulungelelanisa ukukhutshwa kweemfuno zomsebenzi wokucoca, kodwa andikhange ndibone mahluko kakhulu. Singayilawula inkqubo kunye namandla okukhupha ngokulula kunye nesicelo esidibanisa ngokuchanekileyo, kuyinyani ukuba asiphoswa yimisebenzi emininzi.
Njengoko kwenzeka ngexesha kunye neRoborock S7, Amava endiwanikwe sisikhululo esitsha esizenzekelayo, ebeselunge ngendlela emangalisayo. Ngokwam, ndikhetha inkqubo yokuchitha umjikelo etankini ukunqanda ukudala ukungcola okungaphezulu ngengxowa kunye nokunciphisa ulondolozo, nangona kunjalo, kwenza kube lula ukususa ukungcola ngokusebenzisa iibhegi zakho ezivaliweyo ngokufanelekileyo.
Irobhothi iye yasungulwa ngexabiso ukuba malunga nee-euro ezingama-299, inokuthengwa ukusukela ngoku kwi-Geekbuying, nangona kulindeleke ukuba ifikelele kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso kungekudala. Nokuba kufanelekile ukuba utyalomali kuthintelwe ukungabikho rhoqo, ndiyishiya ezandleni zakho.
Ukuzikhupha ngokwakho kwiRoborock S7
Ithunyelwe nge: 15 de julio de 2021
Esimisebenzi mininzi ngengxowa okanye itanki
Ukusekwa okulula kuyilo olulungileyo
Unxibelelwano kunye noqwalaselo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Isitishi sokulahla inkunkuma iRoborock senza kube lula [Hlaziya]
Uhlalutyo lwe-AUKEY LS02 smartwatch kunye neshaja yeAircore 15W